ဒီမိုကရေစီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းခေတ်တွင်မီဒီယာကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » ဒီမိုကရက်တစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်း၏ခေတ်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲ
2017 NAB ပြရန် နားထောင်ခြင်း
ရောဘတ်Krüger၏ Co-ဖန်တီးသူအားဖြင့် Kyno
၏နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်ရဲ့ "ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး"အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အရာဖြစ်၏။ ဒါဟာအတွက်ရရှိလာတဲ့, entry ကိုတစ်ဦးအနိမ့်အတားအဆီးကနေတစ်ဆင့်ဖန်တီးဖို့ပိုကလူ enabled ထားပါတယ် မာလ်တီမီဒီယာ နှစ်ပေါင်းများစွာအစောပိုင်းကနေ့၏အလင်းမြင်ကြပြီဘယ်တော့မှမယ်လို့အတွေ့အကြုံများကို။
ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲ? ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှာအကြီးအကျယ်အရည်အသွေးကိုတိုးတက်မှုနှင့်အတူဖိုင်-based Workflows များ၏နိဒါန်းအတူတကွဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုတော်လှန်ခြင်းမူပြီ တတ်နိုင်ကင်မရာများ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် software တတ်နိုင်ဆိုလို ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး; နှင့်အွန်လိုင်းဗီဒီယိုပေါက်ကွဲမှုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။ NLEs နှင့်အခြား post ကိုထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုတစ်ဦး Entry-level ကို PC သို့မဟုတ် Mac ပေါ်မှာလုံလောက်စွာ run နိုင်ပါတယ်နှင့်တီဗီသို့မဟုတ်ပင်ရုပ်ရှင်ရုံအရည်အသွေးကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းနေပါစေအတှေ့အကွုံသင့်အဆင့် Frankie, Frame.io နှင့် Wipster တူသောကုန်စည်နှင့်ပလက်ဖောင်းစေ web-based ပူးပေါင်းတစ်ဦးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာကြပါပြီ။
ပြဿနာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတခုကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်အကြောင်းအရာ၏သက်သက်ပမာဏဖြစ်သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း 4k နှင့်ပင်တတ်နိုင်ကင်မရာထွန်းစက္ကန့်ထက်မပို 1,000 megabits မှာရိုက်ကူးဖမ်းယူနှင့်အတူယနေ့ဖမ်းမိအကြောင်းအရာအစုလိုက်အပြုံလိုက်ယခင်နှစ်များတွင်နိုင်စွမ်းဘာမှကျော်လွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ရုံအသစ်စက်စက် Panasonic က GH5 က In-ကင်မရာ GH400 ရဲ့4သို့မဟုတ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် 100MBit2K သည် RAW မှတ်တမ်းတင်နိုင်စွမ်းဟာđi Inspire 4200 ထံမှ 5.2MBit မှဘစ်နှုန်းရဲ့တက်ရွေ့လျား၏ထင်ပါတယ်။ ထို့အပွငျစျေးပေါတဲ့ရိုက်ချက်ပိုအမြင်များကို enable ပြုလုပ်ကင်မရာရရှိမှုနှင့်အတူ - ဒါကြောင့်အပေါ် GoPro, မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့် - output ကိုတစ်ခုတိုးလာပါသည်။
စင်ကြယ်သောအချက်အလက်များ၏ကြောင်းငွေပမာဏနှင့်အတူ, မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းကကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုနှင့်ပင် 2017 အတွက်ဖြေရှင်းရသေးတနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာအတန်ငယ်၏ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေး sours ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး ဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးရှိပါတယ်။
disk space တည်းဖြတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စျေးကြီး SSD ကိုသိုလှောင်မှုကိုအသုံးပြုပြီးအထူးသဖြင့်အခါ, တစ်ဦးဝေဖန်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ: ProRes HQ အတွက် 3K ရိုက်ကူးထားသော၏4နာရီ disk space ကိုအကြမ်းဖျင်းတဦးတည်း terabytes လိုအပ်သည်။ သူတို့ disk space ကိုများထဲက run သို့မဟုတ် archive ကိုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုတက်မောင်းချင်ကြဘူးလျှင်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သောမီမှုကြောင့်ဒီရန်, ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသိုလှောင်မှုအတွက်အမှုများစွာနှင့်အတူစူပါထိရောက်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ရှည်ခြင်းမှပစ္စည်းနှင့်အတူရွေးချယ်ဖြစ်ခြင်းကြာပါသည်။
ဖိုင် Format ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောပစ္စည်း, ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ, (RAW S-Log in ဝင်ရန်, V-Log in ဝင်ရန်, LUTs etc) ကိုင်တွယ်အရောင်နှင့် metadata ကိုလည်းစံဖြစ်လာကြပါပြီ, ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကြောင့်လိုက်လျောညီထွေတစ်လမ်းအတွက် built ခံရဖို့ရှိသည်, အမြားအပွားကိစ္စများတွင် compatibility ကိစ္စများန်းကျင်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်မီတာဒေတာကိုကမ္ဘာကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဟဇာတစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမတိုးတက်မှုအများကြီးအတူနေဆဲအလွန်စိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ယာဉ်စူးစမ်းဗီဒီယိုထုတ်လုပ်သူများအဘို့အလားအလာသူတို့ဘဝအဖြစ်ဝေးပစ္စည်းအဖွဲ့အစည်းကသက်ဆိုင်ရာကြောင့်သူတို့အားဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုမစောင့်ထားပြီးလွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ပေးထားသောပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာတည်ဆောက်ခြင်းနေဆဲအလုပ်, အတွေ့အကြုံ, ကိရိယာများနှင့်နီးပါးအမြဲခက်ခဲတဲ့ trade-off လိုအပ်သည်။
အဘယ်မှာရှိကြောင်း 2017 အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာရသနည်း
တီထွင်မှု၏နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်ရဲ့တန်ဖိုးရှိဝေးလွန်းလုံးဝမတူကွဲပြားမှုနှင့်အရည်အသွေးအားဖြင့်ချမှတ်ထားစိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့် negated ခံရဖို့အားပေးနေကြတယ်, ဒါပေမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေလက်ထက်ရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့နောက်ထပ်ပိုမိုလွယ်ကူစွာသူတို့ရဲ့ရူပါရုံကိုအောင်မြင်ရန် ပို. ပင်ရွက်ပေါက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်အားဖွင့်, တီထွင်ဖန်တီးမှုအားကောင်းရန်သူတို့ကိုကျော်လွှားဖို့ဘယ်လိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ nitty-gritty မှဗီဒီယိုပညာရှင်များ၏စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်သည်နှင့်, ဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်ရန်အာရုံစိုက် turn နိုငျသော tools တွေလိုအပ်ပါတယ်။
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit 2017-04-28
ယခင်: Entries သည် motion + ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းသူဟာ Emmy ခေါ်ရန်မေလ 1st တွင်ပိတ်
နောက်တစ်ခု: အငယ်တန်းဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ (Entry Level)